Nri kachasị mma maka ụdị azụ na ụdị akwarium Azu
Portillo nke German | | Ngwa, Azụ azụ
O nwere ike ịbụ na ị nwere akwarium ma ị maghị ihe ị ga-azụ azụ gị. E nwere ọtụtụ puku ụdị dị iche iche nri azụ. Onye ọ bụla nwere ihe dị iche iche na njirimara dị iche iche na-eme ka ọ baa uru maka otu usoro ụdị karịa nke ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwapụta nri kachasị mma maka azụ dabere na ụdị dị iche iche ọ masịrị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi azụ azụ gị nke ọma, ịnwere ike ịchọta ya niile ebe a.
1 Nri azu azu
2 Azụ nri Sera Flocken
3 Nri azu nri nri
4 Nri azu nke Tetramin
5 Ọdọ mmiri azu
6 Dajana Betta nri azụ
Nri azu azu
Ọ bụrụ na akwarium gị bụ mmiri oyi, ụdị nri a bụ otu n’ime ihe kachasị mma ị nwere ike iji. Ha bara ezigbo uru maka ego, ite ahụ bukwara ibu. Enwere ite ndị ọzọ nke nri azụ bụ nke pere mpe ma nke a na - eme ka o sie ike ijide nri iji nye ya azụ ahụ. N'okwu a, Site na ịnwe ite nri kachasị ukwuu, ị nwere ike ibute nri azụ ma nye ha nri na-enweghị isi.
Ihe oriri a dabere na flakes, ya mere enwere ike ịgbari ya ngwa ngwa ma ghara inye nsogbu mgbaze. Ngwakọta nke akpịrịkpa bụ ihe okike. Enweghị kemịkal ọ bụla. Nke a na - enye azụ ahụ ike zuru oke igwu mmiri nke ọma ma wee nwee afọ ojuju ogologo oge. Nri a ha ga-enwe ezigbo ahụike na agba mara ezigbo mma.
Echefula na nri a ka akwadoro maka azu mmiri oyi. Nke kachasị mma bụ ụdị azụ azụ ọla edo dị iche iche. Nwere ike ịzụta ya site na ịpị ebe a.
Azụ nri Sera Flocken
Sera - Nri zuru ezu ...
Typedị nri a ka emere ndị mmadụ nwere ụdị akwarium dị iche iche nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ, nri a dabere na flakes dị iche iche ga-abata. Karịsịa, ọ ga-abụ nnukwu enyemaka iji zụọ azụ mmiri ọkụ, nke chọrọ nri pụrụ iche.
Mgbe ị mepere ite ahụ, ị ​​ga-ahụ na e nwere ụdị akpịrịkpa 4 dị iche iche. Agba ọ bụla bụ ihe dị iche. Nke a bara ezigbo uru, n'ihi na otu ite nri, ị nwere ike ịzụ ụdị azụ dị iche iche nke ga-eri ọtụtụ ụdị ọkacha mmasị gị.
Akwadoro ya nke ukwuu maka azu di oku na mmiri. A naghị atụ aro ya maka azụ n'ụdị mmiri a mana nke ahụ buru oke ibu. Zụrụ ya na ezigbo ọnụahịa ebe a.
Nri azu nri nri
Sera ọdọ mmiri Granulat 1,000 ...
N'ebe a, anyị nwere ụdị nri azụ ọzọ a na - eji mee ka azụ gị rie ihe niile. Ọ bụ nnukwu nhọrọ ebe ị nwere ike ijikọta nri na flakes na nri granulated. Typedị nri a nwere nnukwu uru na ọ na - atọ anụ azụ anya ogologo oge. Na mgbakwunye, ọ ka mma ịmegharị gburugburu ebe nri dị na steeti ya, ebe ọ bụ na azụ azụ ga-eri nke ahụ.
Akara a nwere ihe mejuputara ihe oriri di iche iche nke gha achota na azu gi di nma. Ọ dị mkpa inye azụ azụ nri dị mma ka ha wee nwee ike izere ịrịa ụdị ọrịa ọ bụla. Otutu n’ime ha, n’enye nri n’enweghi nsogbu, ụfọdụ ero na-awakpo ha, na-eke ọrịa, oge ụfọdụ dị oke njọ nke na ọ na-eduga n’ọnwụ.
Usoro nke ngwaahịa a pụtara n'ihi na ọ nwere nnukwu ọdịnaya nke mineral na vitamin. Nke a pụtara na enwere ike ịgwakọta ya na carbohydrates na protein. Onu ogugu nke ihe ndi ozo bu nke kwesiri ka azu nwere ihe ndi ozo. Lee, can nwere ike ịzụta ya na ego ọnụ.
Nri azu nke Tetramin
Ọ bụrụ na azụ̀ gị bụ nke ụdị osisi dị ebe okpomọkụ ma ọ bụ chee na ọ dị mkpa ka ị zụta ụfọdụ, mara na ha nọ n’ụdị azụ nke kacha sie ike ilekọta. Yabụ, nri ga-abụrịrị ihe dị mkpa iji kpuchie ya ma ị ga-enye ya nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka akwarium ahụ na-aga nke ọma.
Nri a bụ otu n’ime nhọrọ kachasị mma maka azụ azụ nke ebe okpomọkụ. O sitere na uto nke oma nke uto ha na-enyekwa gị ihe niile ịchọrọ iji gbakee ma sie ike. Brandsdị ndị ọzọ na-eme ka azụ ghara ịdị ike, agụụ na-agụkarị, ma ọ bụ na-anaghị arụsi ọrụ ike. Mgbe ị malitere ịzụ azụ gị na ika a, ị ga-ahụ ha nke na-enwekwu obi ụtọ ma na-arụsi ọrụ ike.
Azụ nwere ike ịrịa ọrịa ma ọ bụrụ na nri ma ọ bụ mmiri adịghị mma. Iji zere ọrịa a, ọ kachasị mma ịzụta nri na ezigbo akara. Akara a na-enyere azụ ahụ aka ịcha ụcha dị mma, ebe ọ nwere ihe niile na-edozi ahụ ka ọ dị mma. Zụrụ ya site na ịpị Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Ọdọ mmiri azu
Tetra Pond Sticks dị njikere maka ọdọ mmiri. Azu ndi a gha agha kariri nihi na ha aghaghi iguzogide onodu gburugburu ebe obibi kachasi di na mbara. N'ihi nke a, nri ga-eweta nri niile dị mkpa ka ha wee nwee ahụike zuru oke yana na ha nwere ume niile ha chọrọ ibi na gburugburu ebe a gbagwojuru anya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta. Ọ bụ nri dị mfe inye. Ihe dị mma banyere ika a bụ na azụ na-atọ ụtọ nke ukwuu mgbe ha na-eri ya. Nke a bụ n'ihi na, mgbe ị gbanyere ya, azụ na-eche na ha bụ ụmụ ahụhụ dara. Yabụ, ọ bụghị naanị na ha na-aga ogologo iri ha, mana ha na-adọta mmụọ ịchụ nta dinta ka ha dịrị ndụ wee wakpo ha.
Ọdọ mmiri Tetra na-ejide 7 L -...
N'aka nke ọzọ, ọ nwekwara ezigbo uto na ogo. Akụkụ ndị a ga-adịrịrị mma na nri azụ, ka ha nwee ike ịzụlite ma dịrị mma kwa afọ na ike ha. N'agbanyeghị nri dị mma, ọnụahịa ya dị oke ọnụ. Nke a na - eme ka ọ ka mma ọzọ. Lee ị nwere ike ịzụta ya na ezigbo ọnụahịa.
Dajana Betta nri azụ
Typedị nri a, dịka aha ya na-egosi, bụ ihe a na-eji azụ azụ azụ. Ọ bụ ụdị nri kwesịrị ekwesị maka ụdị azụ niile, mana ọkachasị maka betta, ebe ọ bụ na agbanwere ha. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị dị iche iche dị iche iche, ndị ọzọ ga-enwe ike iri nri nke ọma. Nweta otu ebe a.
Enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a ị nwere ike ịzụta nri azụ dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Azụ nri